Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd.nke e guzobere na 1995, nwere ihe karịrị afọ 25 na mpaghara nke akwa. Ejiri ike ịmepụta akwa akwa yana ịnye ọrụ kacha mma.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd.ọkachamara na mmepe na ntinye nke egwuregwu egwuregwu n'èzí na ime ụlọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, n'ihi nchegbu mba ụwa nke mmetọ plastik, ụlọ ọrụ anyị na-agbanwe ka ọ bụrụ ihe eji arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi na ngwaahịa na-adịgide adịgide.
Anyị ụlọ ọrụ na-onwem na ọkachamara 8-agba igwe, 10-agba ígwè obibi akwụkwọ igwe na dijitalụ ígwè obibi akwụkwọ igwe, Anyị na-eji elu-edu akụrụngwa iji hụ na ọ bụla echiche nke ndị ahịa nwere ike na-enweta. Anyị ụlọ ọrụ na-onwem na ise mmepụta edoghi na mụ ikike mmepụta ihe, nke nwere ike igbo mkpa niile nke ndị mmekọ niile.
Ugbu a, anyị na-emepe emepe teknụzụ dijitalụ iji gboo mkpa ndị ahịa. otutu okooko osisi, ma dozie akara ukwu eji ebi akwụkwọ buru ibu, mmetọ dị njọ, wdg.
Anyị ga-enye a ule akụkọ na ikpeazụ nnyocha akụkọ dabere na 4-ebe usoro nke anyị niile akwa, na-enye a zuru set nke mgbe-sales ọrụ usoro